Zvita 9, 2018 Denial245
Hey, Guys Hi!!! Kana uine mubvunzo mupfungwa dzako se sei kuti vawane 192.168.0.1 IP kero? uye Unoda kuziva pamusoro 192.168.0.1 Login gadzira, kana zvirokwazvo zvino haufaniri kushamisika kana kuwana kunetseka zvakare? kukonzera pano munyaya ino Chikamu yangu, Ndikuudze zvose nzira uye mamiriro ezvinhu kuwana 192.168.0.1.
192.168.0.1 chinhu private IP kero Internet Protocol VERSION 4 (IPv4) samambure (Chiri aizivikanwawo hondo kero iri kombiyuta zvesayenzi). Icho default configuration IP kero Wireless routers kana ADSL (Asymmetric Digital rinotengeswa nevaridzi Line) modems zvinoberekwa makambani akaita Netgear, D-Link, TP-Link, Vamwe. Mamaneja kunyaradzana pamusoro routers izvi zvinogona kupindamo nokushanyira ichi 192.168.0.1 IP Address pamusoro browser.
Sei danda kuti 192.168.0.1?
➥ Chokutanga, Kubatanidza router kuti Computer yako kana tablet Via munhu that no wired kana Wireless kubatana.
➥ Next, kuzarura chero Web Browser pakombiyuta yako manually kutaipa kero 192.168.0.1 pamusoro Browser kero bhaa shure achizviendesa kupinda, uye imi muchaona Login peji yacho.
➥ In peji ino, unogona kupinda yakarurama Username uye pasiwedhi.
➥ Kana ukakanganwa uye handizivi router kuti Username uye pasiwedhi, tapota pinda Username uye Password se "Admin" mose minda ivavo chikonzero ndizvo default Username uye pasiwedhi zhinji routers.
Handigoni Login kuti Router My, Zvokuita?
Kana iwe achitaipa 192.168.0.1 kupinda Browser asi zvikasashanda ipapo 192.168.0.1 haisi IP kero router yako
Nzira yakarurama kuwana kwenyu kwakarurama IP Address:
➥ Kana ukashandisa Mac - Enda Applications > Utilities > chiteshi. Kamwe uri Terminal, mhando"ipconfig" uye > pinda.
➥ Kana ukashandisa Windows - Run tsvakiridzo pamusoro kombiyuta yako Command Kukurumidza (CMD) . Pakangotanga murayiro bhokisi yakazaruka, mhando "ipconfig" uye > pinda.
Sei Set Up Wireless Router For The Time First?
➥ Chokutanga, batanidza kombiyuta yako router wako Lan (munzvimbo Network) waya.
➥ Zvino akavhura Browser pamusoro kombiyuta yako uye kupinda https://192.168.0.1 ari kero bhaa.
➥ Zvadaro Login peji imwe vachaonekwa. ikozvino
➥ Zvino kupinda default Username uye pasiwedhi zvakanyorwa pamusoro router.
➥ Next Restart router wako uye akaisa SSID (Service Set Identifier) zita. Ichava zita router renyu kuti kucharatidzwa kune dzimwe mano.
➥ Zvadaro Simudzirai pasiwedhi muna Network Security Settings.
➥ Now, tinya bhatani rakanzi Next.
➥ Reboot ari router imwe yakawanda nguva kuponesa pazviruva.
➥ Now, unogona kutsvaga wako Wireless kuti samambure Service Set Identifier (SSID) zita ne Laptop yako kana runhare. Zvino Pinda pasiwedhi, uye zvichava kwakabatana wenyu router kuti Internet kubatana.
Iva Login Password For D Link Wireless Router
➥ Chokutanga akavhura Browser uye kupinda https://192.168.0.1 ari kero bhaa.
➥ watinya Next pamusoro mauntenance bhatani
➥ Zvadaro tinya Admin Button
➥ Zvino changed password
➥ Mushure kuchinja pasiwedhi tinya yokugadziridza bhatani.
➥ zvino unogona login pamwe pasiwedhi itsva.
Ndinofunga kuva ruzivo rwakakwana pamusoro 192.168.0.1 Login. Ndinovimba kuti siyana mashoko anobatsira kwauri asi kana iwe kusangana chero dambudziko panyaya this post, zvino tapota kupindura kwatiri tichaedza kugadzirisa dambudziko rako nekukurumidza. Tinotenda kuti kushanyira kwedu nzvimbo.
Previous Post:192.168.1.1 || Sei login 192.168.1.1 IP Address?
Next Post:Chii 192.168.0.0 IP Address?